Patronpath oo Daahfuray Jiritaanka Websaydh Cusub | Martech Zone
Patronpath Waxay Daahfureysaa Jiritaanka Websaydh Cusub
Friday, May 2, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii ugu horaysay ee lay shaqaaleysiiyay Wadada, Waan ka argagaxay (haa, taasi waa sax) websaydhka kor u kacay. Waxay ahayd iftiin saafi ah, bog la'aan, dib-u-hagaajin dhab ah (in kasta oo SWFObject la raray), macneheedu maaha cusbooneysiinta waxyaabaha content iyo inta badan oo dhan, ma jirin wax taraafiko ah.
Waxay ahayd degel ay ku baxday kharash badan, oo aan dib ugu soo laabanayn maalgashigii. Markii aan la xiriiray hay'addii soo saartay goobta, ma jirin wax raali gelin ah. Xaqiiqdii, markii aan ka cabanayay SEO-ga, waxay bixiyeen qandaraas kale oo qiimo leh si loo hagaajiyo goobta. Taasi waxay ahayd cawskii ugu dambeeyay! Ma jirto hay'ad damiir kasta leh oo dhisi doonta goob aan cidina heli karin.
Hadal ku filan! Mark Gallo iyo aniga waan la shaqeynay kuweena Wada-hawlgalayaasha Magaca iyo Suuqgeynta oo ku taal Kristian Andersen oo ay iyagu u qorsheeyeen goob, oo lagu fuliyo Nidaamka maareynta maadada Imavex. Kristian wuxuu hibadiisa ku leeyahay hibo aan caadi aheyn.
Waxaan soo marnay dhowr jeer oo soo noqnoqoshada ah ka hor intaanan degin qaabeynta. Waxaan aaminsanahay inay ka hadlayso xirfadayada shirkadeena iyo waliba awooda ay sumadeena bilaabeyso inay ku sii xoojiso!
Boggu hadda waa nool yahay, waana wax qurux badan oo aad u fudud in la maro. (Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso - haa, baloog garaynta ayaa noqon doonta muuqaal mustaqbalka). Waa kan shaashadda:
Waan ku faraxsanahay in tani ay ahayd hal dhinac oo aan awoodnay inaan soo gudbinno ka hor inta aan shaqaaleysiin Agaasimahayaga cusub ee Suuqgeynta, Marty Bird! Waan necbahay inaan dhiibo barta hore.
Qoraallada moobaylka oo xoog ku imanaya!
May 2, 2008 at 9: 01 PM
Waa kuma wakaaladda kugu dallacday websaydh aan lagu soo qori karin matoorada raadinta ??
May 2, 2008 at 10: 12 PM
Waan kuu sheegi lahaa, laakiin ma doonayo inaan ku riyoodo riyooyinki hore ee kugu dhacay, Jim!
May 3, 2008 at 9: 49 PM
Goob fiican oo raadineysa Doug. Ma sugi karo inaan ku tuso bog kale oo cusub (tilmaan maldahan) dhawr toddobaad gudahood 🙂